Torohevitra haingon-trano valo miendrika haingo hanamboarana ny tranonao hanaraka sy hifindra
Izahay dia mitady fomba tsotra sy azo antoka hatrany handravahana ny trano malalantsika. Tsy ilaina ny maika ho amin'ny fahombiazana, manandrama tsikelikely, ary ho hitanao miadana ny toetra mampiavaka ny olona izay tena tianao sy tadiavinao. Avy amin'ny rindrina voninkazo vaovao, hatramin'ny fanaka vita amin'ny akora natoraly ...
Mampiasà haingo mamorona hamoha ny efitrano fandraisam-bahiny reraka. Ovay ny toerana lao sy karakaina amin'ny fampidirana haingon-trano mafana sy malaza, manao ny efitrano fandraisam-bahiny ho toerana manintona indrindra ao an-trano. Manantona entana taloha amin'ny fivarotana mitoby eo amin'ny rindrin'ny galeriana, rakofana taratasy modely ny rindrina ...
Ny fironana fanaka lehibe indrindra tamin'ny taona 2020
Tsy takona afenina fa afaka manamboatra efitrano ny fanaka mety. Na misafidy vokatra miavaka namboarina ianao na amin'ny alàlan'ny safidin'ny mpivarotra ambongadiny, dia misy ifandraisany amin'ny fitadiavana fanaka mifanaraka amin'ny endrika kanto noforoninao. Androany, hampahafantariko anao ny fironana ambony amin'ny fanaka amin'ny taona 2020. Manomboka amin'ny f ...
Tsenan'ny asa tanana Spark
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-13
Ny asa-tànana vy vita amin'ny vy dia naseho voalohany tao amin'ny China Import and Export Fair (Canton Fair) tamin'ny 1991, avy eo nalaza be tamin'ny Amerikanina sy ny eropeana. Eoropa sy Etazonia no faritra fanondranana nentim-paharazana indrindra amin'ny vokatry ny orinasan'ny orinasanay, ka ny 60% -n'ny vokatray aondrana ...
Fampirantiana momba ny asa-tanana sy kolontsaina
Ny fampirantiana kolontsaina sy kolontsaina Spark Craft (Anxi) fahatelo, ho iray amin'ireo fandaharana mifandray amin'ny festival artista Maritime Silk Road, dia natao tao Anxi China nandritra ny taona 2019. Nahaliana ny mpanjifa sivily sy ivelany izany fampirantiana izany. asa tanana sy ny kolontsainy. Ireo ...
Isan-taona ny orinasanay dia mamoaka ireo mpanamboatra vy 40 ambony indrindra ao amin'ny lisitry ny entana, ary amin'ity taona ity dia faly izahay manambara fa ny vokatra vy dia laharana faha-24 ao amin'ilay lisitra. Noforonina ny lisitra mba hanampiana bebe kokoa hahafantatra momba ireo mpanamboatra vy manerana ny firenena. Ny lisitra dia natambatra tamin'ny fanampian'ny metal fab ...